Ny mponina any New Orleans dia nandidy ny hiala satria ny rivodoza Ida dia manakaiky
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny mponina any New Orleans dia nandidy ny hiala satria ny rivodoza Ida dia manakaiky
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny ben'ny tanàna any New Orleans dia mangataka famindram-pahefana tsy maintsy atao any amin'ireo faritra ivelan'ny rafitra levee, ao anatin'izany ny farihy Catherine, Irish Bayou, ary ny Nosy Venetian.
New Orleans dia miandrandra fiatraikany lehibe amin'ny Rivo-doza Ida.
Ny tafio-drivotra tropikaly dia sokajiana ho rivodoza sokajy 1.
Ny forecasts fanampiny dia nilaza fa mety hivadika rivodoza lehibe sokajy faha-3 i Ida.
Tahaka ny niomanan'i New Orleans ny fianjeran'i Hurricane Ida, dia namoaka sy nanome baiko ny famindrana ho an'ny mponina rehetra monina ivelan'ny rafitry ny tanàna ny ben'ny tanàna.
“Izao no fotoana hanombohana,” New Orleans Nilaza ny ben'ny tanàna LaToya Cantrell tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny zoma teo rehefa nanentana ny mponin'i New Orleans izy mba hanangona entana ary hiala mialoha ny hahatongavan'ny tafio-drivotra.
Ben'ny tanàna New Orleans, LaToya Cantrell
Izy manokana dia nandidy ny olona rehetra monina ivelan'ny rafitra levee izay miaro ny faritra tsy ho tratry ny tondra-drano mba hiala amin'ny toerana azo antoka kokoa, ary nanoro hevitra ireo tao anatiny izy mba hieritreritra ny hiala ihany koa.
Ireo ao anaty levee dia afaka miala amin'ny safidiny ihany koa, hoy i Cantrell.
The Sampan-draharahan'ny toetrandro amerikana dia nilaza tamin'ny zoma fa ny tafio-drivotra tropikaly, izay saika hihazo an'i Kiobà, dia voasokajy ho rivodoza sokajy 1, miaraka amin'ny rivotry ny 120 kilometatra isan'ora. Efa namoaka fampitandremana ny rivo-doza ho an'ny faritany andrefan'ny firenena ny governemanta kiobàna.
Ny forecasts fanampiny dia nilaza fa mety hivadika rivodoza sokajy 3 lehibe i Ida miaraka amin'ny rivotra hatramin'ny 193 kilometatra isan'ora rehefa tonga any amin'ny morontsirak'i Etazonia. “Ny làlan'ny vinavina dia nizotra nizotra nankany New Orleans. Tsy tsara », hoy i Jim Kossin, mpahay siansa zokiolona ao amin'ny sampan-draharaha momba ny toetrandro.
Ny governoran'i Louisiana John Bel Edwards dia nanambara fa misy fepetra maika ho an'ny fanjakana ny alakamisy ho fiandrasana ny fizotran'ny toetrandro tonga amin'ny faran'ity herinandro ity.
"Mampalahelo fa ny morontsirak'i Louisiana rehetra dia eo amin'ny tsangambato mialoha," hoy i Edwards, ary nanampy fa "amin'ny asabotsy hariva, tokony ho eo amin'ny toerana kasaina hialana amin'ilay tadio ny tsirairay."
Mety hitokona ny rivodoza Ida New Orleans tamin'io daty io ihany izay nahatonga ilay rivodoza Katrina nandrava 16 taona lasa - 29 aogositra.
Tamin'ny taona 2005 dia namono ain'olona 1,800 i Katrina raha namakivaky ny faritra iray nanakaiky ny morontsirak'i Louisiana afovoany ka hatrany amin'ny fanjakan'ny fanjakana Mississippi-Alabama. Niteraka tondra-drano mahatsiravina koa tany New Orleans, ary manodidina ny 80% ny tanàna ao anaty rano.